न्युयाेर्कमा परराष्ट्रमन्त्री महतलार्इ भेटे नर्वेका विदेशमन्त्रीले
न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशरण महत र नर्वेका विदेशमन्त्री बोर्गे विरिन्देबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने र मैत्री सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले जानकारी दिए।
भेटका अवसरमा नर्वेका विदेशमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका बारेमा विशेष चासो राखेका थिए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री डा. महतसँग एसियाका लागि बेलायतका मन्त्री आलोक शर्माले पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । सो अवसरमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, व्यापार तथा व्यवसायको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । साथै, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको माग तथा समस्याका बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री थोमस सान्नन् र परराष्ट्रमन्त्री डा. महतबीच पनि भेटवार्ता सम्पन्न भयो । सो अवसरमा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमै आक्रोशित भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य... १४ मिनेट पहिले
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध... ५० मिनेट पहिले